कोरोना संक्रमणबाट बेलायती कूटनीतिज्ञको हंगेरीमा मृत्यु | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
कोरोना संक्रमणबाट बेलायती कूटनीतिज्ञको हंगेरीमा मृत्यु
प्रकाशित मिति १३ चैत्र २०७६, बिहीबार १५:४२ लेखक नेपाली जनता
लन्डन । कोराना भाइरस(कोभिड–१९) को संक्रमणबाट हंगेरीमा एकजना बेलायती कूटनीतिज्ञको मृत्यु भएको छ । बेलायती विदेश मन्त्रालयले बुधबार दिएको जानकारी अनुसार हंगेरीको राजधानी बुडापेस्टमा रहेको बेलायती दूतावासमा कार्यरत ३७ वर्षीय स्टिभन डिकको कोभिड–१९ को संक्रमणबाट मृत्यु भएको हो ।
दूतावासमा ‘डेपुटी हेड अफ मिसन’ का रुपमा कार्यरत स्टिभनको मृत्यु मंगलबार भएको बेलायती विदेश मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
बेलायती विदेश सचिव डोमिनिक राबले स्टिभनको मृत्युले आफू निकै दुःखी भएको बताएका छन्। ‘स्टिभनको निधनको खबरले म अत्यन्तै मर्माहत भएको छु। यो दुःखद घडीमा म उनका बुवा स्टिभन र आमा क्यारोललाई समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु,’ राबले भने। स्टिभन गत हप्तादेखि अस्वस्थ भएको र स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा कोभिड-१९ को संक्रमण देखिएको थियो।
सन् २००८ मा बेलायती विदेश सेवामा आबद्ध भएका स्टिभनले साउदी अरब र अफगानिस्तानमा रहेका बेलायती दूतावासमा पनि काम गरेका थिए। हंगेरीमा उनी बेलायती राजदूत आयन लिन्ड्सेको प्रमुख सल्लाहकारको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए।
बेलायतका अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट ९ हजारभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने ४६५ जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै हंगेरीमा २६१ जना संक्रमित हुँदा १० जनाको मृत्यु भएको छ।
उपराष्ट्रपति पुन अष्ट्रियाको भियना प्रस्थान
काठमाडौं । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ अष्ट्रियाको भियना प्रस्थान गरेका छन् । जेठ १४ गते राजधानी भियनामा सुरु हुने…
यसरी माया गर्नेको याद मेटाउन सकिएला ?
काठमाडौं । मायाको परिभाषाले दुनियाँका प्रेमि–पे्रमिकालाई समेट्न सकेको भए विछोड शायद हुने नै थिएन । माया प्रेममा परेका हरेकका…
मेडिकल माफियाहरूलाई गगनकाे जवाफ, तनावमा कम्युनिस्टहरू
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगनकुमार थापाले झापामा मेडिकल कलेज चलाउँदै आएका दुर्गा प्रसाइँले लगाएको आरोपलाई ठाडै खारेज…
२ झाँक्रीको हत्या गरेको आरोपमा ४ महिलासहित २६ विरुद्ध कैद फैसला
धादिङ । गङ्गाजमुना गाउँपालिका–२ लताबमा दुई झाँक्रीको हत्या गरेको आरोपमा धादिङ जिल्ला अदालतले २६ जनालाई कारागार सजाय सुनाएको छ…
‘कसलाई अङ्गालो मार्नुपर्ने हो म धित मरुञ्जेल मार्दिउँला’
काठमाडौँ । २०१८ फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा आफ्नो टिमलाई समर्थन गर्न रसिया पुगेकी क्रोएसियाकी राष्ट्रपति कोलिन्डा ग्राबर किटारोभिकको अहिले…
सिरियामा रुसी सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त २६ जनाको मृत्यु !
काठमाडौं । सिरियामा रुसी सैनिक विमान दुर्घटनामा परेको छ । बीबीसीका…
वाण्ज्यि विभागमा दर्ता नै नभएको कम्पनीबाट कोरोना ‘र्‍यापिड टेस्टिङ किट’ टेण्डरको खुलासा
यहि महिनाको तलव कर्मचारीलाई खुवाउन समस्याः पर्यटन व्यवसायी
अमेरिकामा एकैदिन ९ सय बढीको मृत्यु, संक्रमितको संख्या २ लाख नाघ्यो 27 views
टेकुमा उपचाररत दुई जनाको दोस्रो रिपोर्ट पनि पोजेटिभ 25 views
काठमाडौं क्षेत्र नं १ का प्रदेश सभा सदस्य दिपेन्द्र श्रेष्ठको भिडियो सर्वाजनिक, काठमाडौंका जनताले खानेपानी पाएन ? 22 views
‘खानेपानी सहज वितरणको लागि भिडियो बैठक’ 18 views
अब एसईई विद्यार्थीका लागि नयाँ सुविधा 15 views
वाण्ज्यि विभागमा दर्ता नै नभएको कम्पनीबाट कोरोना ‘र्‍यापिड टेस्टिङ किट’ टेण्डरको खुलासा 12 views